8866617wagen CoHomestay Service Apt.2 (Opp. Airport) - I-Airbnb
8866617wagen CoHomestay Service Apt.2 (Opp. Airport)
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguDipesh
Ithe nca kwisikhululo seenqwelo-moya i-Surat, iflethi okanye indlu ekwicomplex enefenitshala eyi-1, yindawo entle yokuhlala efudumeleyo nenendawo entle. 'likhaya' esilihoya ngentliziyo nomphefumlo wethu:-) Iifoto nazo zithetha ngokwazo.
Ngaba wakhe waphupha ngeholide ekude nesiphithiphithi sesixeko kwindawo ejikelezwe luhlaza nobutofotofo babantu obathandayo? Wamkelekile kwi-Surat Cohomestay Weekend Address, ikhaya elinikezela ngezinto zobunewunewu ezingaphaya kokulindelweyo.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex yokuqala ekwicomplex yase-Surat enezixhobo ezingaqhelekanga zokonwabela ubumnandi. Ngoko khululeka, uphole uze uvuselele kwi-Surat Cohomestay Weekend Address.
I-Wifi – i-47 Mbps
Indawo epholileyo nekwizinga eliphezulu enezinto ezinokusetyenziswa ezineenkwenkwezi eziyi-7 endlwini. Yonwabela ubunewunewu uze wonwabele uhambo lwakho lweshishini okanye lweholide kwenye yezona ndawo zintle nezigcinwe kakuhle zase-Surat. Zonke iindawo ezinomtsalane kwisixeko saseSurat zikufutshane nendlu. Isikhululo seenqwelo-moya i-surat International yimizuzu eyi-2 kuphela yokuhamba (iikhilomitha eziyi-2,5 kuphela). Zonke iivenkile ezinkulu kunye nendawo entle yesixeko se-surat ziikhilomitha eziyi-6 ukusuka kwipropati. Ulwandle oludumileyo lwe-Surat Dumas lukwiikhilomitha eziyi-7.5 ukusuka kwipropati.
Kwishishini, i-Surat Diamond Bourse ezayo ikumgama wemizuzu eyi-18 (10 Km) ukusuka kwipropati. Imarike yeempahla ze-Surat ikude ngeekhilomitha eziyi-16. Inkonzo yeteksi ifumaneka lula kwindlu.
Umbuki zindwendwe ngu- Dipesh
Sihlala kwisixeko esifanayo kwaye sisoloko sikhona ukuze sikuncede. Sifuna nje ukufowunela nawuphi na umbuzo wakho ngexesha lokuhlala kwakho kwaye sikukhokele ukuba uhambe esixekweni ngaphandle kwamagingxigingxi.